Cannes Film Festival 2019: Carioca iyo Elton John sawirada maalinta, barnaamijka - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »2019 Cannes Film Festival: Carioca iyo Elton John sawirada maalintii, barnaamijka
2019 Cannes Film Festival: Carioca iyo Elton John sawirada maalintaa, barnaamijka
2019 Cannes - Festival Cannes ayaa sii this Thursday 2019 16 May 2019 waayo, maalintii ay saddexaad. xiddigaha shows iyo movies barnaamijka ee tartamada kala duwan ka mid ah, waxay Rafaa Carioca ah ayaa la qorsheeyay maanta Croisette ah oo ku beegnaa 25 sano oo ka mid ah City Cabsi ah iyo Elton John waa u kaca tallaabooyinka ...
Cannes 2019 Fadhiyada Fasalada
Filimadu waxay ku tartamayaan Cannes
(Xulashada Rasmiga ah ee 2019)
Cannes Film Festival Jury 2019
Wargeyska 2019 Cannes Film Festival
Guuleystayaasha Festival Cannes Film
Palme d'Or ee Cannes Film Festival
Maalinta gaarka ah ee Cannes Film Festival 2019, khamiista 16 May. Iyadoo tartanka la bilaabo dhowr maalmood hadda, haddii ay dhacdo cusub ka dhici doona ku maqnaa Croisette baaritaanka filimada tartanka iyo dabaaldega aan dhammaadka lahayn ee xiddigaha ah rooga cas: Rafaa Carioca a abaabulay sida goobasho flash for a 25 xuska sanad guurada of sii daayo City cabsida, Kadaabad comedy nidaam jees (si tartiib ah) ee Cannes laftiisa. Filimku wuxuu, 4K version soo celiyo waa la baadhi doonaa caawa ay joogaan Alain Chabat Gérard Darmon, Chantal Lauby iyo Dominique Farrugia. Taageerayaashu waa inay isugu soo uruuriyaan tirooyin saacadaha 18 ee qoob-ka-cayaarka iyo dareen-darrada.
At barnaamijka xafladda Cannes ee Thursday this, waxaa iska cad yahay filimada ee Selection ee rasmiga ah, tartamaya d'Palme Or, "Atlantic," sheeko agaasimaha Franco-Senegal Mati Diop, meel xaafad caan ah Dakar. Ken Loach waa calaamadee maalinta la filimka cusub "Waan ka xumahay waxaan geftay Waxaad", saddex sano ka dib markii uu Palme d'Or helay 2016 for "Waxaan, Daniel Blake". Rocketman, Elton John biopic muusikada, ayaa noqon doona tartan iyo xiddiga Britishka ayaa la filayaa rooga cas. Muuqaal kale oo la filan karo oo ah maalintaas. Raadi noolaha dhacdooyinka muhiimka ah ee 2019 Cannes Film Festival
"Waxaan u maleynayaa in dadku ay yar yihiin" George Clooney ayaa difaacay hooyada yar yar Meghan
Kulan aan horay loo arag oo lala yeeshay dad badan